Ummemezeli waseYiputa uphika ukuQothulwa kobuNtu kwaye uthi akukho ubungqina bokufakela i-6 yezigidi zamaYuda: uMartin Vrijland
Ukunyuswa kweNkundla yeNyala ngokukhawuleza kubangela ukuba abantu abaninzi baseNtshona Koloni basabele. "Hayi, hayi, hayi! Sibone imifanekiso embi kakhulu! "Ngaba ingcinga yokuqala. Oko ke amaxesha abaqondi ukuba uninzi lwezi imifanekiso ziqukiwe kwiinkampu apho kwavalwa ATM yi Amanyeneyo, ukuvumela amabanjwa ukuba uithongerden ithambo. Ezi izibakala zembali apho ubungqina obungenakuphikiswa, kodwa Ngenkohlakalo ukumpompoza ezibuthathaka kangangokuba nathi emehlweni elithi 'ukwalela Ngenkohlakalo' ukuba ucango slam, njengoko usenza na iNgqina likaYehova xa uvula umnyango kwaye ngubani obona amaflaya athabisayo ezandleni zakhe. Sifuna, asikwazi kwaye akufanele sicinge ngako. Ndinezo mna. Andifuni ukukhanyela ukuQothulwa kobuNtu ngokusemthethweni. Oku nje ngokucwangciswe kwisikolo esiprayimari kunye nazo zonke iifilimu, iincwadi kunye nezifundo zembali ezenzileyo. Ngoko ukuba ummemezeli we-TV wase-Egypt ezama ukugxeka ukuQothulwa kweNkohlakalo, ngoko siya kuphetha ngokukhawuleza: 'iindaba zobuxoki kunye namaSilamsi'. Nge-16 kaFebruwari le nto yenzeke kwi-Memri TV (jonga apha).
Nangona kunjalo, ndake ndithatha ingxaki ukuba ndijonge ngokubhekiselele kuzo zonke izinto ezichasayo kwi-Holocaust kwaye oko kungikhokelela kumbono wokuxilongwa kwengqondo, ndimele ndithi. Awukwazi, njengokuba kunjalo, ubujonge, ngokuba awufuni ukufumana impembelelo efanayo njengoko uneminyaka eyi-8 ubudala, okokuba abazali bakho baqambe amanga kuwe lonke ixesha malunga nobukho beSinterklaas. Yona yinto ephazamisayo eyakufundisa njengomntwana ukuba oko wakhe wakukholelwa kuyo, ngokukhawuleza ibe buxoki. Unokuphika ukuba kukho uThixo okanye unokuphika ukuba umhlaba ujikeleze; unokuphika ukuba ungumntu kwaye ufuna ukuba ngumfazi kwaye ungakhanyela ukuba ukholelwa kwindawo enkulu. Into kuphela ongenakuyikhanyela, phantsi kwesihlwayo sesigwebo sento, kwiNkohlakalo. Ndimele ndivume ukuba kuwe kunjalo Kwaye isizathu sokuba ndibe ngongqongqo kuloo holo. Ndazibuza: "Kutheni kufuneka ukukhanyela imbali esemthethweni malunga nokubingelelwa kwesohlwayo? Ukuba into enjalo iyahlwaywa, kufuneka ibe nefuthe kakhulu."Ewe, ndaqonda ukuba iqaphela kuluntu yamaYuda, ngenxa yokuba kufuneka ukuba azisole amaxhoba amaninzi kangaka, kodwa wabamba kwakhona izandi ukuba akukho amaYuda million 6. Ngaba kungekudala uza kuhlawuliswa ukwenza uphando okanye ucinge ngalo mbali? "UZiziphi idiots ezimele zibuze ukuba ii-6 million zamaYuda!"
Ividiyo elapha ngezantsi i-1 ukusuka kwinqaku endiyibonile. Ndacinga ukuba kuya kulungele umzamo wokufumanisa ukuba kutheni ungavalelwa iingcinga njengoko kuchazwe kwifilimu engezantsi. Ndakuzibuza nokuba kutheni i-YouTube ibona loo mafilimu ngokuphindaphindiweyo. Yintoni engabonakaliyo?
Kukho ngokukhawuleza kubonakala kunamaphepha amaninzi angaphantsi kweNkqantosi, ukuthetha okungenani. Ngokomzekelo, umphandi uDavid Cole (yena ngokwakhe owayengamaYuda) waya kukhangelelwa eAuschwitz waza waya kwisigqibo sokuba le nto yayingalunganga ngamagumbi egesi.
Emva koko ufumanisa ukuba kukho iibhayisikobho ezichazela ukuba amagumbi egesi ayengenawo amagumbi egesi. Andifuni ukuva konke ongenakukubulala abantu abaneZyklon B nonke; Andifuni ukuva konke ongenakukwazi ukuphatha abantu kulawo magumbi egesi kwaye ubungqina bokuba bubuxoki. Andifuni ukuliva lisiwe!
Ukuba ukhangeleka phambili, kubonakala ukuba kukho iwebhusayithi kunye nesihloko holocausthandbooks.com apho ungayifumana yonke loo mifanekiso ngokulandelana. Kukho newebhusayithi ene sihloko questioningtheholocaust.com. Kutheni abantu benza umgudu omkhulu ukukhanyela ukuba ukuQothulwa kweNkqantosi? Ngaba yinto nje eyenziwe? Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ndizibuza ukuba kutheni amajelo aseDatshi ayehlala ehleka ngokunyaniseka malunga nenkosana UBernhard wayengumNazi kwaye kutheni kungekho nto ingqalelo kwinto yokuba u-Adolf Hitler wayexhaswa ngemali kwaye wancedwa kwisikhwama ngemali evela kumaqela owadala ama-Allies. Akunakuyinyaniso into yokuba lo mboniso waseYiputa uthi, iMfazwe Yehlabathi Yesibili yayimfuneko ukuseka ilizwe likaSirayeli? Kuyamangalisa ukuba le mhlaba wasePalestine sele igcinwe ngexesha leMfazwe Yehlabathi yokuqala (ngexesha Isivumelwano seSykes-Picot)kodwa lihlazo: andifuni ukuba yi-Holocaust denier! Hayi, hayi, hayi! Oku kungavumelekanga, akunakwenzeka, oko kuhambelana nento yonke endikhuliswe ngayo kwaye ndijika ihlabathi lijonge phantsi! Akukho! Ndiphinda: andifuni ukuba yi-Holocaust denier! Yonke inokuqiniseka ngokuqinisekileyo; fuck it! Andikhathali ukuba ndibe neengxaki zokuxilongwa kwengqondo kwaye andinandaba ukuba iividiyo zikholisa. Andifuni nje! I-Sinterklaas yayibi ngokwaneleyo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: memri.org, holocausthandbooks.com, questioningtheholocaust.com
UMphathiswa weFransi unikezela iinyanga ze-6 zokulibaziseka ekwandiseni irhafu yerhasi! Uloyiso #GiletsJaunes?
Umhlolokazi wegosa likaNazi i-8 inyanga kwiseli ngenxa yokunyuka kweNkohlakalo
tags: 6 izigidi, WaseYiputa, eziziimbalasane, yokuqhumisela, Ukwahlukana kweNkohlakalo, AmaYuda abulala, UMartin Vrijland, khanyela, umbonisi, tv, yemfazwe yehlabathi yesibili, ezintandathu
Gladiator wabhala wathi:
26 Februwari 2018 kwi-19: 33
Esi sihloko kwakuyinto elishisayo kwenye indawo kusasa ngaphambi kwezolo, ndabhala ilensi apho kwaye ...
I holohoax okanye ibuhlungu, ndiyathetha ukuba inkohlakalo yinto ebaluleke kakhulu kunabo bonke abantu kunye neyona nto ibaluleke kakhulu kumbali yoluntu!
Ukuba abantu abafuni ukwenza uphando ngale nto kwenza ukuba izwane zam
Kananjalo oko ukufumana phezu kwenu ukuba uyenze le nto ndibhala apha kuni uthi abathandi isidudu kodwa ndiya kuhlala ngokupheleleyo kwingxelo yam apha ukuze Ngenkohlakalo njengoko sikhokelwa ukukukholelwa ayizange yenzeke, ngokuqinisekileyo eliphezulu kakhulu !!
27 Februwari 2018 kwi-16: 07
Unokuthi ubhekisele kwiingxelo ezisemthethweni ze-Red Cross apho umntu efika kwi-271.301 yokufa. Uze uphinde uzikhuphe ngokubhekiselele kwizigidi zabantu abafa kunye nabantu abafudukela eYurophu. Ubani abaxhatshazwayo be-Holocaust victims, njengokuba njalo kufuneka wenze yonke idigri ze-180. I-GroSSe Lüge isala imithetho ..
26 Februwari 2018 kwi-19: 34
26 Februwari 2018 kwi-19: 44
Ndifumana umyalezo nazo zonke iifilimu; "Le vidiyo ayitholakali kweli lizwe"
Ndiyilindele ukuba. EFransi kuyinqatshelwe ukuphenya iingxabano malunga nokuQothulwa kwesizwe. Ndiyazi ukuba ezi ndaba malunga nommemezeli waseYiputa uya kufumana amajelo aseFransi rhoqo. Andiyilindele. Ukuba kuza kumaphephandaba aqhelekileyo aseFransi, kukho isicwangciso emva kwayo.
26 Februwari 2018 kwi-20: 14
Unengcamango yoluqhinga okholelwa ukuba kukho iqela labalawuli abaphambanisa 'umntu oqhelekileyo'?
Okanye njengoko uArjen Lubach ebeka kwi-Volkskrant ye-25 ngoFebruwari 2018:
'Ukuchasa kwam ngokuyinkohlakalo ukucinga ngezo zinto zigqithiseleyo. Ingcamango yokuba kukho ngokwenene iqela labalawuli abaxinzezelayo 'umntu oqhelekileyo'. Kukho ke intabalala ngeziganeko kunye, iintlobo ngokwaneleyo angasebenziyo ngokungathembeki, kodwa kukho ngokwenene ajenda ebanzi-based kukuqinisekisa ukuba abantu bahlala ivalwe umlomo, leyo kum ukungaqondi paranoid. "
Ukucingela inkohliso nokuphikisana nokuQulwa kobuNtu kubangelwa ukungaqondi kakuhle. Yaye ukuba awukwazi ukukhanyela ukuba ukuQothulwa kobuNtu akuhlangene nento 'evulekileyo kwaye igxilwe'. Enye enye into! Oko kuvelele. Ingqiqo.
26 Februwari 2018 kwi-20: 54
Ngaba uHerr Lubach uyazibhokoxa aze akhululeke ukuba akhe kwiindawo zokuhlala ngoku angakwazi ukuzithengisa lolu hlobo lwengxelo? Ngaba uya kuba yiklabhu?
26 Februwari 2018 kwi-19: 50
Ndinomnye ongcono wePoland waseKolf .. nangona iLüge yile ndlela, inyaniso ... .have uBennie kunye nefrills yakho enobuqili:
IG Aushwitz, yakha iG IG FARBEN (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft).
I-IG Farben yayiyi-khampani yaseJamani kunye ne-pharmaceutical conglomerate ekwahlukana ngexesha le-denazification emva kweMfazwe Yehlabathi II
Inkampani yakhiwa kwi-1925 ukusuka kwinani leenkampani ezinkulu zamakhemikhali ezazisisebenzisana ngokusondeleyo ukususela kwiMfazwe Yehlabathi I; njenge-congolomerate-seek-collateral-seeking-collateral, ixhomekeke kakhulu emva kwenkampani yaseMerika i-Standard Oil kwaye yayixhomekeke ngokukodwa kwiinkampani ezilandelwayo ze-Standard Oil. Ngethuba lolo suku, IG Farben yinkampani enkulu kunazo zonke eYurophu kunye neyona nkampani enkulu kakhulu yekhemikhali kunye neyeza.
I-BASF, i-Bayer, i-Hoechst, i-Agfa, i-Griesheim-Elektron, i-Weiler Ter Meer.
Umpumelelo: AGFA Gevaert, BASF, Bayer, Sanofi
Abamangalelwa kwi-dock ngosuku lokuqala lovavanyo lwe-IG Farben.
I-United States of America vs. Carl Krauch, et al., Neyaziwa ngokuba IG Farben Trial waye yesithandathu neemvavanyo elinambini ngenxa yobubi imfazwe le Authorities US iqhawe kummandla wabo umsebenzi eJamani (Nuremberg) emva kokuphela kweMfazwe Yehlabathi II ngokuchasene mveliso acinge okanye IJamani eJamani ngokuziphatha kwabo ngexesha lolawulo lukaNazi. Abamangalelwa kulo mzekelo babenomqondisi bonke bomlenze okanye IG Farben. Kwabaxhasi be-24, i-13 itholakala enetyala. Inkcazo yafakwa kwi-3 Meyi 1947; ityala lithe lavela kwi-27 Agasti 1947 de kube ngu-30 Julayi 1948.
Bonke abachasayo abagwetywa entolongweni xa bekhululwa. I-Federal Cross of Merit yanikezelwa.
26 Februwari 2018 kwi-19: 55
Kwaye le yigolide ... njengokuba i-msm ibika malunga neLüge enkulu kwaye ungamlibali uFred Leuchter ????
Ngubani ovunyelwe i-bill yegesi? ?
26 Februwari 2018 kwi-20: 06
Akukho mfana onqabileyo. Bah!
26 Februwari 2018 kwi-20: 10
Kodwa oku kungumphumo, umalume omkhulu ungcwatywe apha. Tribute kuSean ukubonisa oku, wafela i-LIE !!
UDkt USean Hross wenza le vidiyo kwisayithi yemfazwe eyayiyinyaniso yomKristu eyenziwa ngokulawula ilizwe lethu. Bafaka uphawu lwabo emacaleni kwakhiwo nakwizinto zangaphakathi. Abakwazi ukuzinceda ngokwabo, zivumba, ziphawula imida yazo kwaye zibulala.
Nceda khangela kwimifanekiso yenkomfa yaseYalta. FDR, uStalin noChurchill babesebenza kunye. Isipho esiBhulu kunazo zonke iziphilo zabo, abathandayo kunye nendlela yabo yobomi ukuze basindise empini.
26 Februwari 2018 kwi-22: 03
Iqhumiso langempela (idini elinyukayo)
26 Februwari 2018 kwi-21: 04
26 Februwari 2018 kwi-21: 36
Indoda ye6 yezigidi ...
27 Februwari 2018 kwi-05: 47
Ukuba isifundo esinjenge-'Holocaust 'sisigxininiswe ngokucacileyo kubantwana kunye nobomi babo bonke, kufuneka kubekho umoya. Kwaye akuveli eZyklon B.
Jonga le docu. kodwa kanye. Ukuqinisekisile yonke into, kodwa ukuvula i-dissonance engqondweni.
Mishko wabhala wathi:
27 Februwari 2018 kwi-11: 28
Ndazalelwa kwi-1971, kwaye isenzo sam sokuqala sam doll saba yiMithandathu yeMillion Man.
Kamva ndafunda esikolweni malunga namaxhoba amaJuda angama-6.
Emva koko intanethi yafika.
Andizange ndifunde esikolweni ebizwa ngokuba yiZionism ("imibutho yamaYuda") ngaphambi kwe1939
ukuya kwi-boycot eJamani kunye nokuvakalisa imfazwe kweli lizwe.
Andizange ndifunde ngesicwangciso seMorgenthau esikolweni, silambile ngendlala
Amajoni aseJamani kwiinkampu zoxinzelelo kunye neRhin emva kwe2the imfazwe yehlabathi.
Ukuba kuya kubakho ukuhlushwa kwiimvavanyo zaseNuremberg, ukuba abatshutshisi nabanye abasebenzi
ngaphezu kwe-80% yabandakanya i-joidels.
Ukuba neentloni zathethwa ngumntu.
Yaye ukuba inani le-6 yezigidi sele lihamba lijikeleze kwi-2 yemfazwe yehlabathi.
Ndinayo kwiingxoxo ngasese malunga "nama-joidels" ngoko akunjalo
izandi ezichasene namaSemiti.
Kodwa ewe, ndiyilungu le-goyim, abantu bakhonzi.
3x ukuqagela obengabantu abakhethiweyo (Herrenvolk, hahaha).
Ewe, inqabeni entabeni, ibhakoni elikhanyayo, iCamelot,
uya kusibonisa indlela!
Esihogweni, nangona konke ukubulela.
NB: Xa i-2 imfazwe yehlabathi, ndiyifumana lewebhu kwiNetherlands
UGerard de Boer - https://gerard1945.wordpress.com/ - luhle kakhulu.
27 Februwari 2018 kwi-13: 45
@Mishko Wunderbar und wundervoll! A ingcaciso emangalisayo yonke into ngokuphathelele Ngenkohlakalo, ucinga njani na kwisizukulwana yakho abanamava / kwafuneka ukuba zonke ezi ubuxoki kunye oomatshini ubuxoki apha Neander Land (ungasixoleli ibinzana, ngokuqinisekileyo kukho ngokwenene Dutchmen okanye Neederlanders kodwa okunye, ndabiwa bubuthongo, okanye ngobuthi yaye oko chronisch- nemisebenzi chemtrails phezulu)!
Ndiyathokoza ukuba zonke uzifumene apha apha. Ngelishwa, inene isininzi badala kwaye nkqu (????) e famielje yam ikholelwa kule sp (r) ookjes. Ndiyazi ukuba abantu abadala ukuba AUSJ-WITZ zsein gewesen kwaye ngokwenene wabuyela mabali mabi stupid ukuze, nje engenangqondo ngoko ke ecotha kakhulu kwaye Ndisakholelwa, musa nje ukukholelwa kodwa "Uncritically"! *)
Kukho zombini apha eJamani yonke ABONWABILEYO abantu abaninzi ehlabathini kwaye nani nangoku ikhula ukwazi inyaniso yaye ufuna ukwazi. Noko ke, yengcinezelo iindlela ezimdaka abalawuli kuquka joidels sikhulu ... kodwa ke inyaniso ayikwazi ukucinezela ngenxa yokuba izibakala, imbali njengoko zenzeka ayikwazi ukucima okanye abantu kwenza ingqondo yabo logic turning se benzisa.
Siyabulela oku, kunye neengcebiso.
*) Abantu INdu kufana Ukutyhwatyhwa, kungoko indlu haunted kwi uNonzwakazi imisebenzi 8 apha kwaye apho. Oku ondla uhlobo mnandi / yokunqakulisa uncwine endodeni zingqondweni vd ekugqibeleni uyoyika / esetyenziselwa zasendle kwaye ngoku ngenxa intshukumo, kuba lipolisa, kuba akukho msebenzi, akukho umfazi, okanye vrwou, kungekhona umntu, kodwa indoda njalo njalo. Ngamnye sinokuzaliswa ukuba zel ucinga ngokwabo.
27 Februwari 2018 kwi-14: 48
Andiyi kuphinda ndiphule iinyembezi ... zokuhleka?
27 Februwari 2018 kwi-14: 53
28 Februwari 2018 kwi-18: 44
HAHAHAHAHA bayazi indlela yokuyizisa eBertelsmann AG, ukuba i-billowy humor ke ihlala i-muffs neNAZI ??
IJamani ayifumani uqeqesho luka-Anne Frank: 'Iphutha elibi lenziwe'
1 Matshi 2018 kwi-18: 56
Ulibale ukukhankanya ukuba iBertelsmann uthathe inxaxheba kwi-EU East Stratcom (STASI) kwaye ungumdlali oziqhenyayo weMaliavelli umvuzo, ukufunda nokujonga izinto ezininzi?
Tom Middendorp, uMphathi woMbutho, liye ngaphambi msitho ibhaso nyangweni Machiavelli 2014 Lecture, othi 'Kakade iyaxokozela ukuxhasa ngumbandela nkqubo, abantu nemikhosi exhobileyo. Inkxaso ebanzi yoKhuselo iyimfuneko, kodwa ingabonakali.
1 Matshi 2018 kwi-16: 57
pst, musa ukuxelela i-torrent malunga nayo
Uninzi kakhulu, ifilimu yeeyure ze-6, ngokucacileyo ngokucacileyo.
Ndandimangaliswe kukuba ndibukele amaxesha e-2.
1 Matshi 2018 kwi-17: 01
U-Hitler wayesenesikhathi esithile eMzantsi Melika, indoda yendoda indoda esiyixoki.
1 Matshi 2018 kwi-19: 45
Ngelo xesha, kwi-npo
1 Matshi 2018 kwi-21: 03
Awuqondi ukuba le nkcazo malunga noPutin kwi-NIS ayisususwanga kwinetha ngabaqela bezopolitiki baseYurophu (stasi).
8 Matshi 2018 kwi-20: 05
Ff esinye isandi.
9 Matshi 2018 kwi-01: 13
Ibali lomntu osindayo owayekho kwiimbono phantsi kwevidiyo. Akangivumeli ukuba ndihambe ...:
Iiyure ze-12 ezedlule (zihleliwe)
Ndiyindoda yokusindisa. Ndahlala eKeiv kunye nomkhulu wam "uRabi Dick Weinstein" siphila ngokuthula phantsi kolawulo lweCCCP ngoko amaNazi afika. Basiyisa eAuschwitz kwaye sasizimisele ukusebenzela ukufa iminyaka eyi-3. Ngolunye usuku amaNazi athatha uMkhulu wam, wathi "amadoda ethu emagqabini angaphambili ayaphuma kwiindawo zokubasa izibilini wakho unokusinceda" .... Andizange ndiphinde ndimbone. Iinyanga ze-6 kamva ngomhla we-6th ka-Juni u-Soviet God wathunyelwa ngumesiya uJoseph Stalin (owe wawa) Ndathi umkhosi obomvu weza waza wasikhulula. Bafika kum kwaye bathi le nto yashiywe ngu-Grandpa. Bandizisela i-Lampshade eyenziwa kwisikhumba sam sikhulu kunye namanye ama-66 amaYuda. Ndakhala ngenxa yeminyaka eyi-6 elandelayo. Isibonda sesibane sisesecaleni sam njengoko ndibhalela oku, ngoko ungandixeleli ukuba idini lesibingelelo laliyintetho. #feelsorry4me
9 Matshi 2018 kwi-11: 12
Ewe, ngoko sele sele bekulungile kwi-NLP kwaye ngoko ke inani le-6 kufuneka likhankanywe rhoqo.
10 Matshi 2018 kwi-21: 36
UFANELE UZIBHELE: Uchaza ukudibanisa phakathi (i-evangelical) yobuKristu kunye neengcinga ezisongela ubomi beZiyonism. Kwaye kuphosakele ngokuxuba ukholo kunye neengcamango ...
10 Matshi 2018 kwi-22: 33
Ngoku ubuKristu kunye nonke inkolo debunk kunye nebali lichanekile, kodwa i-christenzionism debunking ngesiseko seBhayibhile ibonakala ngathi andiyiyo into enyanisekileyo.
Ukuba siyazi ngoku ukuba imbali yamashumi adlulileyo edlulileyo, unokuqikelela ukuba le nto iyinyani yonke imbali. Ngaba kunokwenzeka ukuba zonke iinkolo zinokusekelwe kwiincwadi ezidibeneyo; okanye kwi-falsification yomlando (ngenjongo, kuba ngokuqhelekileyo inceda injongo ngaphandle koko awukhathazi)?
Zonke iicawa zikhonza isicatshulwa saseHegelian apho iziprofeto kunye nezithembiso kubalandeli zisekelwe kwiingxabano kwihlabathi. Ulwahluko owenziwe ngokucacileyo phakathi kweenkolo kufuneka ekugqibeleni lukhokele kumxube oyifunayo kunye no-1 kuphela umntu etroneni: umakhi walo mkhosi wentolongo. Injongo ephambili kukubamba yonke imiphefumlo kwi-AI kwaye inokwenziwa nenjongo (kodwa ixabiso leencwadi ukuchaza)
10 Matshi 2018 kwi-23: 46
Le nyathelo lokuqala ekudambiseni abo baqhubeka bekholelwa ngokupheleleyo kwimfundiso yaseBhabhiloni. Konke okunye, ndiyavuma ngokuqinisekileyo nawe, bona i-Pike (Imilinganiselo kunye nenqobo) evuma ukuba iifowuni kunye neenkolelo zibekwe ngaphaya komnye ukuzisa ukuhlanganiswa.
14 Matshi 2018 kwi-23: 29
Funda le ncwadi nguMnu King "imfazwe embi" efumaneka kwi-PDF funda ikhonkco http://www.realhistorychannel.org/THE%20BAD%20WAR2apdfversion.pdf
KwiNew York Times evela kwi-1906, inani le-6.000.000 labizwa ngokuba ngamaYuda. Ingcaciso engaphezulu ayimfuneko.
« Ukuhlaselwa kwezixhobo zamakhemikhali - iflegi yamanga ekwenzeni e-East Ghouta eSiriya?
Umlobi wezandla uthi: U-Arjen Lubach ngu-anagram umsetyenziso kuJelab Raunch Bin Laden »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.323.842